Play fahaiza-manao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto, dia manazatra ny fahaiza-manao. Hanampy anao tantara miaraka amin'ny fanatanjahan-tena fitongilanana, ny miaramila sy ny fahafinaretana fotsiny. Miezaha hahazo ny lalana mba tsy ho sakana nidona; hisitrihana ny enta-mavesatra eo amin'ny milina; hiakatra ny hazo avo indrindra. Ny mpiandry harato dia tsy maintsy deftly misambotra ny baolina, ary ny mpamily – mametraka ny fiara teo amin'ny fitobiam-piarakodia, mba hanatanteraka SAINA FANETRI-BEN'NY mampidi-doza sy tratran'ny nanenjika. Dexterity tinady sy ny tanana izy, raha milalao thimbles, ary ny handrava ny baolina teo an-tsaha, dia tsy maintsy ho deftly hitifitra miloko akorandriaka. Mahery fo ny traikefa nahafinaritra lalao koa tsy maintsy ho Nimble mba hahazoana diamondra iray hafa.
Ny tsara indrindra fahaiza-manao Games
Milina fanoratana Willie (Willie Wheels). Part 2
Ny afo sy ny rano: Oroka
Namely ny asa tanana
Niady tamin'olona. io
Tsara zana-tsipika sponjy Bob
Mahery fo mamely hery 3
Sifotra Bob 3
Letaha Bob 6: Winter Ny Tale
Letaha Bob 8: History of ny nosy
Namely an'i Justin Bieber!
Mpanjaka sy Cannon
Hetezo ny tady - ratsy kisoa
Home Ondry Home 2: Very eny amin'ny habakabaka
Lalao Fahaiza-manao Games tamin'ny Category:
Farany fahaiza-manao Games
Baolina manosika snowman
Jumping Princess Shimmer
ny tadio ireo
Mandeha ny Titans Tanora! TV ho an'ny Fanavotana
Toerana tena fahaiza-manao lalao maimaim-poana
Lalao Online fahaiza-manao Games
Flash lalao ny fahaiza-manao, ny tsirairay izay, eny
Te-ho tsy marani-tsaina, fa koa nahira-tsaina. Rehefa ireo toetra ireo dia mitambatra ao amin'ny olona, ​​dia mahatsapa hatoky tena toa mety hitranga atao tsy ho raharahanao. Ary aza mandanilany ny fahaiza-manao mba hanampiana ny lohateny izay rehetra afaka malalaka eo amin'ny fahaiza-manao lalao tsy misy faneriterena hilalao.
ny fahaizany mamikitra azo voalaza ao ny fahafahana niara-juggle enina ny fanilo mirehitra, mitsambikina ny sakana, na nanoroka teny an-dalana mba tsy nahatsikaritra izany ny olon-kafa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hametraka ny tenany sy ny toe-javatra araka ny marina hanao izany, na dia mety ho toa sarotra izany.
Aoka horaisintsika ny sasany amin'ireo foto-kevitra
fahaiza-manao Games malalaka mitora zava-baovao foana izy, fa mitovy fironana dia azo inoana fa ny lohahevitra noho ny tari-dalana ao amin'ny gameplay. Sehatra afaka hihaona vaovao endri-tsoratra, fa dia mbola platformer, ary ho indray mitaingina ny toerana mba hihaza ny asa tanana, handrava fahavalony, hahita ny lalan-kivoahana, na lalan-kafa. Tanteraka ny fanadinana, dia mila fahaizany mamikitra mba tsy ho latsaka ao amin'ny lavaka mangitsokitsoka ny tendrombohitra tsy mba solafaka sy mijanona amin 'ilay tady.
Flash fahaiza-manao lalao dia ahitana ihany koa ny fanehoan-kevitra sy ny toetra ilaina hafa. Ohatra, marina, hafainganam-pandeha, fandinihana sy ny hakingan-tsaina. Ao amin'ny fanatanjahan-tena tsy misy dexterity tsy afaka manao, ary na dia ny faharetana dia tsy hanampy anao ho tafavoaka velona rehefa ela ny ela, raha Jery mitongilana ny vato misakana izay mila hitsambikina na tsy ho afaka namely ny kendreny amin'ny biathlon, ary ao ny ady totohondry peratra dia ho napetraka tamin'ny fihodinana voalohany, raha tsy contrive hahatonga ny hanorotoro kapoka. Rehetra dia tsy maintsy ho Nimble dia lavitra, mba hiatrehana ny zava-tsarotra tsy nampoizina teny an-dalana. Dia tsy maintsy ho afaka ny hanao velona, ​​piranha-feno renirano mba milomano, manao afo, hanorina trano fonenana vonjy maika, mba handresy ny tendrombohitra, hahita ny lalan-kivoahana tao amin'ny zohy, hitsambikina manerana ny elanelana, afa-mandositra ny tompon-tany sy ny bibidia.
karatra tricksters sy sharps - na dia ireo hustlers! Izy ireo karatra mahay manova sy hanafina ny baolina, mamitaka simpletons. Fa ny zavatra nataony dia sarotra ny manaraka, raha ny fahaiza-manao hone nandritra ny fotoana ela.
Afaka milalao ny lalao ihany koa ny fahaiza-manao amin'ny destinos, toy ny baolina. Multi-miloko sehatra bibilava mihazakazaka, lavo hatrany ambony ka hiseho avy na aiza na aiza. Fa tsy nanenika ilay saha, dia tsy maintsy ho ringana amin'ny alalan'ny fitifirana na swapped, mamorona vondrona mitovy. Dexterity dia takiana sy rehefa nitondra fiara handeha, indrindra fa amin'ny toe-javatra mamirifiry. Mitantana kamiao sy ny mpandeha fiara, miezaka ny ho antonona eo amin'ny nifandimby hafainganan'ny na handray ny toerany teo amin'ny fitobiam-piarakodia. Ihany koa ny mahafinaritra ny milalao ao amin'ny mandresy ny fiara izay mandrahona ny miala eo amin'ny lalana amin'ny maranitra indray.
Iza no miaraka amintsika, dia ny mahira-tsaina
Play fahaiza-manao lalao an-tserasera ho maimaim-poana liana amin'ny taona rehetra. Iza no tsy te-hitsapana ny reflexes sy hanatsara izany miaraka amin'ny fanampian'ny virtoaly fialam-boly? Afaka hamono, mba hanao asa fandidiana mba hanamboarana ny fiara, miady, Tsangatsangana, fanatanjahan-tena, dihy.
Simulation zava-misy sy ny tselatra vokatra natao ho an'ny tanora no ho miakatra mpilalao. Near Dora, Tom sy Jerry, ary Little Red Riding Hood eto nifanakaiky ny olom-pantany taloha - Super Mario sy Sonic ny manga sokina. Ny mahery fo ny tantara an-tsary sy ny Sariitatra, TV andian sy ny sarimihetsika kintana no mandray anjara amin'ny tantara isan-karazany. Dia izay manangana sy handringana, mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha sy mitady fanazavana, ka mandehana any amin'ny Misafotofoto, mihaza ka mandosira ny tenany. Ary ianao no ho eo aminy;
Mihazakazaha, hitsambikina, ary manidina
ato aminay, tsy leo ianao, satria fantatsika be dia be momba ny tena mahaliana lalao.